mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ် - အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းခရီးစဉ်စုဆောင်း
ခရီးစဉ်ကိုစုဆောင်းအာဖရိက / အရှေ့အလယ်ပိုင်း:
ဒီဇင်ဘာလ 23, 19 - 2018 နိုဝင်ဘာလ
အဆိုပါကွန်ပျူတာပညာရှင်များစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှမာစတာရဲ့အစီအစဉ် 2500 ကတည်းက 85 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 1996 + ဘွဲ့ရနှင့်အတူ, United States မှာအများဆုံး, ထူးခြားတဲ့လူကြိုက်များနှင့်အောင်မြင်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် 800 လက်ရှိကျောင်းသားများကိုထက်ပို။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးဘွဲ့ရအဆင့်၏အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များပေါင်းစပ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီလက်တွေ့ကျတဲ့ applications များနှင့်အတူ။
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့် applications များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာတုံ့ပြန်ငါတို့သည်အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခံယူ, Greg Guthrie, Ph.D ဘွဲ့ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာဌာနမှူး, နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာ၏ကျောင်း, ဒင်းဂုဏ်ထူးဆောင် Elaine Guthrie ခရီးသွားပါလိမ့်မည် နိုင်ဂျီးရီးယား, ရဝမ်ဒါ, ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ, အီသီယိုးပီး, ယော်ဒန်မြစ်, အဲဂုတ္တုပြည်၌ နှင့် ကြက်ဆင် မှ ဒီဇင်ဘာလ 23, 19 မှနိုဝင်ဘာလ 2018 တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အလားအလာကျောင်းသားများနှင့်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
ဂို့: သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 23rd, (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): ရှိတဲ့ Radisson Blu ကျောက်ချစခန်း, ဂို့, 1 Ozumba Mbadiwe ရိပ်သာလမ်း, ဗစ်တိုးရီးယားကျွန်းဂို့, VI ကို, ဗစ်တိုးရီးယားကျွန်းဂို့, 101241 ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ။ EVENT သည်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ဂို့: စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 24th, (9: 30 AM - 11: 30 AM): ရှိတဲ့ Radisson Blu ကျောက်ချစခန်း, ဂို့, 1 Ozumba Mbadiwe ရိပ်သာလမ်း, ဗစ်တိုးရီးယားကျွန်းဂို့, VI ကို, ဗစ်တိုးရီးယားကျွန်းဂို့, 101241 ။ ရောင်းကုန်ပြီ!6များအတွက်နေတုန်းပဲရှိနိုင်ပါလက်မှတ်တွေ: 00 မှ 8: (အထက်ထိပ်,) 30 pm တွင်သောကြာနေ့အစည်းအဝေး။ EVENT သည်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ဂို့: စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 24th, (2: 00 pm တွင် - 4: 00 pm တွင်): ရှိတဲ့ Radisson Blu ကျောက်ချစခန်း, ဂို့, 1 Ozumba Mbadiwe ရိပ်သာလမ်း, ဗစ်တိုးရီးယားကျွန်းဂို့, VI ကို, ဗစ်တိုးရီးယားကျွန်းဂို့, 101241 ။ ရောင်းကုန်ပြီ!6များအတွက်နေတုန်းပဲရှိနိုင်ပါလက်မှတ်တွေ: 00 မှ 8: (အထက်ထိပ်,) 30 pm တွင်သောကြာနေ့အစည်းအဝေး။ EVENT သည်ပြီးစီးခဲ့သည်။
Ibadan: တနင်္လာ, နိုဝင်ဘာလ 26th, (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): ရွှေ Tulip ဟိုတယ်, ရပ်ကွက် 781 GRA, ယေရိခေါမြို့, Ibadan ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ။ EVENT သည်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ခီဂါးလီ: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28th, (6: 00 pm တွင် - 8: 30 pm တွင်): ရှိတဲ့ Radisson Blu ဟိုတယ်, KG2လမ်း, ခီဂါးလီ။ ပိုကြီးတဲ့အခန်းကိုယခုရရှိနိုင်ပါ! ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ။ EVENT သည်ပြီးစီးခဲ့သည်။
ကမ်ပါလာ: တနင်္လာ, ဒီဇင်ဘာ 3rd, (6: 00 pm တွင် - 8: 00 pm တွင်): ကမ်ပါလာ Serena, PO Box 7814 Kintu လမ်း, ကမ်ပါလာ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
ကမ်ပါလာ: အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 4th, (6: 00 pm တွင် - 8: 00 pm တွင်): ကမ်ပါလာ Serena, PO Box 7814 Kintu လမ်း, ကမ်ပါလာ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
Addis Ababa: ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 6th, (6: 00 pm တွင် - 8: 00 pm တွင်): အိုင်စီတီ Mart အဆောက်အအုံ, Arat ကီလို, Woreda: 09, Sub-City: Arada, Addis Ababa ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
Addis Ababa: သောကြာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 7th, (6: 00 pm တွင် - 8: 00 pm တွင်): အိုင်စီတီ Mart အဆောက်အအုံ, Arat ကီလို, Woreda: 09, Sub-City: Arada, Addis Ababa ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
ကိုင်ရို: အင်္ဂါနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 11th, (6: 00 pm တွင် - 8: 00 pm တွင်): ဂရိကျောင်းပရဝုဏ်, 28 Falaki စိန့်رقم 28 شارعالفلكى, باباللوق, Bab အယ်လ် Louk, ကိုင်ရို 11513, အီဂျစ်။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
အာမန်: စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15th, (9: 00 AM - 12: 00 မွန်းတည့်): لوغراندعمانمانيدجدبايأكوروهوتلزသည် Le Grand အာမန် AccorHotels ဘုရင်မကြီး Nour စိန့်, Shmeisani, အာမန်, 11195, ဂျော်ဒန်အားဖြင့်စီမံကွပ်ကဲနိုင်။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.
အစ္စတန်ဘူလ်: ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 19th, (6: 00 pm တွင် - 8: 00 pm တွင်): Swissotel အဆိုပါ Posphorus အစ္စတန်ဘူလ်, Visnezade Mah Acisu Sok ကအဘယ်သူမျှမ: 19 Maçka, Besiktas, အစ္စတန်ဘူလ်, 34357, တူရကီ။ ချန်လှပ်ထား အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်မှ ဒီမှာ.